नक्कली राष्ट्रवादी देखिने चाहले ओलीको धोती फुस्कियो - नेपालबहस
बिहिवार, नोभेम्बर 14, 2019
पू्र्खाले लडे नालापानी, हामी लड्छौ कालापानी नारा लगाउँदै भारत विरोध प्रदर्शन
काबुलमा आत्मघाती कारबम विस्फोट, बाह्र जनाको मृत्यु
निजामति कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष
मोदी र पुटिनद्धारा भारत र रुसको आपसी सम्वन्धका बारेमा समिक्षा
आइएमईको डबल अफरमा शेरचन भए साताैं
सानिमा कर्जा म्यादी बीमा योजना शुभारम्भ
कुमारी बैंकद्धारा ज्ञानज्योति विद्यालय विपन्न बिद्यार्थीलाई सहयोग
जनता बैंकको जनता अवकाश कोषले संचयकर्तालाई दिने भो १ प्रतिशत मुनाफा
सुनको मूल्यमा भारी बृद्धि
वर्षेनी सास्ती खेप्दै आएका स्थानीयवासी सडक निर्माण हुन लाग्दा खुशी
बर्दियामा ताेकियाे धानकाे मुल्य, माेटाे धान प्रति क्वीन्टल दुई हजार ५३२ रुपैयाँ
खाद्य व्यवस्थाले ३० हजार मेट्रिक टन धान खरीद गर्ने
१० किलो गाँजासहित एक जना पक्राउ
डिउटीमा खटिएको प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्ने प्रहरी खोरमा
श्रीमान विदेश गएपछि जेठीले गरिन कान्छीको विभत्स हत्या
चीन नेपालको कुन हदसम्म भरपर्दो मित्र हो ?
कालापानी समस्या : भारतीय दुतावासको ‘हण्डी’मा बिकेका नेता र प्रशासन
कलाकारबीच ३ किलोमिटर सडक दौड प्रतियोगिता हुने
चौथो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डमा चलचित्र पर्यटनलाइ समेत प्रबर्धन गर्नेछौ !
अब घरमै स-परिवारको साथमा हेर्नुस, ‘पोई पर्या काले’ डिसहोमको १०८ मा
लिपुलेक र कालापानी विवाद बल्झिएका बेला भारतीय अभिनेता गोविन्दा काठमाडौंमा
कैलालीको टिकापुरबाट एनसेलको वाईफाई सेवा सुरु
अब दाँत दुखेर उपचार गर्न भारत जानु पर्दैन !
पत्रकार लम्साललाई ब्लुक्रस हस्पिटलले दियाे ज्यानमार्ने धम्की:- महासंघ र प्रेस युनियनले गरे कारवाहीकाे माग
सुदूरपश्चिमका अधिकांश अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा बिरामी मारमा
सागको सुरक्षा तयारी अन्तिम चरणमा, २२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने
जीवनको सुनौलो सपना साकार पार्न टिभिएस अपाचे रेस ट्रयाकमा सहभागी बनौं
फिफा विश्वकप : नेपाल र कुवेतबीचको खेल भूटानमा हुने
‘एसीसी इमर्जिङ टिम्स एशिया कप’ खेल्न नेपाली टोली बङ्गलादेश प्रस्थान
गृहपृष्ठ अर्थ/व्यापार कृषि
नक्कली राष्ट्रवादी देखिने चाहले ओलीको धोती फुस्कियो
दुई तिहाई समर्थनमा बनेको ऐतिहासिक सरकार प्रमुख खड्गप्रसाद ओली भन्छन्– कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन । प्रसंग थियो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको । दुई महिनाअघि ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिंदै थिए । उनको इशारा खानेपानी सचिवप्रति थियो । यस्तो पीडादायी अभिव्यक्ति दिंदै गर्दा उनले बिर्सिएको पक्ष चाहिं के थियो भने जननिर्वाचित दुई तिहाई सरकारको दम्भ ।
उनी मात्र होइन उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यको हविगत पनि उस्तै देखियो । हिजो सोमबार एकजना मन्त्री भन्दै थिए– सचिवहरुले मलाई फसाए । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव संसदीय समितिको वैठकमा कड्किएका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका यस्ता भनाईले सर्वसाधारण त रनभुल्लमा पर्ने अवस्था आयो ।
पानी जाहाजमा दुलो परेपछि मुसाले साथ छाडे झैं ओलीलाई विस्तारै कसैले नटेर्ने अवस्था आउन लागेको छ । यदि साँच्चै सचिवहरुले सरकारलाई नटेरेको हो भने किन कारबाही गर्न सक्दैनन् ? त्यसो होइन, कुरोको चुरो चाहिं अर्कै छ । राष्ट्रवादी देखिन ओली जस्तोसुकै नाटक रच्न तम्तयार छन् । अनेक चाल चल्दासमेत नक्कली राष्ट्रवादको धोती खुस्किएपछि उनी नयाँ डिजाइनमा लागेका थिए ।
जनताको प्रचण्ड मतका साथ सत्तामा पुगेका ओली सधैं कुर्लने ओली मण्डलीको यस्तो निरिहता ? कारण के होला? बुझ्नै कठिन भएको छ । दुई तिहाईको सरकार जे गर्न पनि सक्षम छ । जनताले त्यो अभिमत दिएका छन् । तर व्यवहारमा भने यस्तो रुञ्चे तर्क गर्न थालेका छन् ओली र उनको मण्डली । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ओली अब पतनको बाटोमा छन् । पानी जाहाजमा दुलो परेपछि मुसाले साथ छाडे झैं ओलीलाई विस्तारै कसैले नटेर्ने अवस्था आउन लागेको छ । यदि साँच्चै सचिवहरुले सरकारलाई नटेरेको हो भने किन कारबाही गर्न सक्दैनन् ? त्यसो होइन, कुरोको चुरो चाहिं अर्कै छ । राष्ट्रवादी देखिन ओली जस्तोसुकै नाटक रच्न तम्तयार छन् । अनेक चाल चल्दासमेत नक्कली राष्ट्रवादको धोती खुस्किएपछि उनी नयाँ डिजाइनमा लागेका थिए ।
विगत एक महिनाको घटनाक्रमले देखाउँछ ओली सरकार दक्षिणी छिमेकीको सच्चा हितैषी हुन् । भारतीय सिनेमाको प्रवद्र्धन गर्न उनले काठमाडौंमा आईफा आयोजना गर्न अनुमति दिए । त्यतिले नपुगेर यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ नै दिने निर्णय गरिदिए । यत्रतत्र सर्वत्र विरोध भएपछि तत्कालका लागि यो निर्णयबाट उनी पछि हटे । साथै, उनको नियत पनि छलाछुल्ल भयो । आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताले भारतीय दलाल भन्ने अवस्था आएपछि उनी तनावमा थिए ।
त्यसपछि दोषमुक्त देखिन उनले भारतीय नाकाबाट आउने तरकारी र फलफुलको विषादी परिक्षण गर्ने प्रपञ्च रचे । यति गर्दा भारतीय दलालको आरोपबाट मुक्ति पाउने ओलीको अनुमान थियो । अनि असार २ गते वाणिज्य मन्त्रीको प्रस्तावमा निर्णय भयो यस्तै । तर उक्त निर्णयमा ओली दुई साता पनि टिक्न सकेनन् । भारतीय पक्षको चर्काे दवावका कारण उनले पूर्व निर्णय फिर्ता लिई नेपालीका भान्छामा विष छिराउने लाईसेन्स पुनः खोलिदिए । यो परिघटनाले ओलीलाई लाभ भन्दा क्षति बढी भएको छ । भनिन्छ नि काग धेरै बाठो भयो भने………. ।
त्यसको रन्को अझै ओलीमा छ । तर यथार्थमा भने उनी कहिल्यै भारत विरोधी थिएनन् र हुने छैनन् । जानकार सबैलाई यो तथ्य ज्ञात छ । जनतालाई एकपटक झुक्याउन सकिएला , तर पटक पटक सम्भव छैन । अहिले यही हालत भएको छ ओलीलाई ।
आफ्नो कमजोरी लुकाउन ओलीको संयन्त्र अब भने सचिवलाई दोषी देखाएर उम्कने दाउमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । वाणिज्य मन्त्री यादवले त विषादी प्रकरणमा सरकारका चार जना सचिवले फसाएको गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री ओली गत शनिबार आफ्नै सांसद्हरुलाई हकार्दै थिए – कसैको दवावमा परिक्षण रोकिएको छैन, भारतबाट पत्र आयो रे , खै कस्लाई आयो ? कस्ले पढ्यो मलाई थाहा छैन, वाहियात । ओलीले सांसद्लाई हप्काएको भोलिपल्टै अखबारहरुले भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक रुपमा पठाएको पत्रको कपी नै प्रकाशित गरिदियो । त्यसको जवाफ ओलीले दिन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ढाँट्ने खानेपानी मन्त्रालयका सचिव कुनै कारबाहीमा परेका छन् ? छैन । किनभने सचिवमार्फत ठूलो कमिसन प्राप्त हुने गर्छ । अरु त अरु हिजो आफ्नो आडैमा आरोपित सचिवलाई राखेर वाणिज्य मन्त्री यादव रोदन गर्दै थिए । फसाउने सचिवलाई सँगै राखेर उनी किन पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए ? बुझ्न कठिन छैन ।
नक्कली राष्ट्रवादी बन्ने ध्याउन्नमा ओली सरकार एकपछि अर्काे खाल्डोमा फस्दै छ । उनलाई जोगाउन अब आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता समेत उत्साही छैनन् । विभिन्न भन्सार नाकामा उनी निकट विद्यार्थी संगठनले विना परिक्षण सामान नछाड्न सम्बद्ध निकायलाई चेतावनी दिइसकेका छन् । तीन वर्षअघि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका बेला ओलीको बोलीले राष्ट्रवादको खोल ओढाइदिएको थियो । त्यसैका बलमा गएको चुनावमा उनी सम्बद्ध राजनीतिक दलले अपार सफलता पाएको हो । त्यसको रन्को अझै ओलीमा छ । तर यथार्थमा भने उनी कहिल्यै भारत विरोधी थिएनन् र हुने छैनन् । जानकार सबैलाई यो तथ्य ज्ञात छ । जनतालाई एकपटक झुक्याउन सकिएला , तर पटक पटक सम्भव छैन । अहिले यही हालत भएको छ ओलीलाई ।
सर्वसाधारणलाई ढाँट्ने नयाँ औजारका रुपमा ओली सरकार अहिले कर्मचारीतन्त्रप्रति खनिएको देखिन्छ । कर्मचारीले फसाउन सक्ने ल्याकत राख्छ भने यो सरकार के को दुई तिहाईको ? इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएको ओली सरकार आखिर कस्ले चलाएको छ ? यी सबै फगत नाटक हुन् । बरु अब सरकारको दिनगन्ती भने सुरु भएको संकेत चाहिं मिलेको लख काट्न सकिन्छ ।
नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ नि – किन लडिस् मंगले आफ्नै ढंगले । ठीक त्यही हालत भएको छ ओली सरकारको । छलकपट र ढाँट काम गर्ने ओली सरकारको नक्कली राष्ट्रवादी छवि उदांगो भएकाले नै यी घटना आएका हुन् । त्यसका लागि ढंग पु¥याउन समेत नजानेकाले पछिल्लो नौटंकी गर्नुपरेको हो । साँच्चै नै कर्मचारीले फसाएको भए तत्काल कारबाही गर्न सक्नु पथ्र्याे । प्रधानमन्त्री ढाँट्ने खानेपानी मन्त्रालयका सचिव कुनै कारबाहीमा परेका छन् ? छैन । किनभने सचिवमार्फत ठूलो कमिसन प्राप्त हुने गर्छ । अरु त अरु हिजो आफ्नो आडैमा आरोपित सचिवलाई राखेर वाणिज्य मन्त्री यादव रोदन गर्दै थिए । फसाउने सचिवलाई सँगै राखेर उनी किन पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए ? बुझ्न कठिन छैन ।
भनिन्छ, निभ्ने बेलाको वत्ती अलि उज्यालो हुन्छ । ओली सरकारको फूर्तिफार्ती अहिले त्यस्तै छ । उनका मन्त्रीहरुको कार्यशैली र बोली वचन हेर्दा लाग्छ कसैले कसैलाई टेर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुबीच समन्वय गराउन सकेका छैनन् । वाणिज्य मन्त्री भन्छन् – विषादी परिक्षण गर्ने ल्याब नै छैन । उता, कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालको कथन बेग्लै छ । उनी भन्छन्, सातै प्रदेशमा भएको ल्याबमा ¥यापिड टेष्ट गर्न सकिन्छ । पूर्व निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था होइन ।
यी दुई मन्त्रीको कथन सुन्ने हो भने ओली सरकार कोप्रति उत्तरदायी छ भनेर बुझ्नै सकिन्न । यो गाईजात्राको अर्थ के ? ओलीको नियन्त्रण छ त मन्त्री वा सरकारी संयन्त्रमा ? ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । यस्तो सरकारलाई किन र के का लागि कस्ले टेर्ने ?
अघिल्लो लेखभ्रष्टाचारको अभियोगमा पूर्वमन्त्री साइदलाई जेल सजाय
अर्को लेखसामुहिक खेतीमा गल्याङ नगरपालिका
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य जाँच गरी बालुवाटार फिर्ता
ओलीको स्वास्थ्य, सरकार र नेकपाको परिदृश्य
प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमै सीमित
भेनेजुयलाका राष्ट्रपति मदुरो र प्रम ओलीबीच भेट
अजरबैजन हिँडेका प्रधानमन्त्री ओली दोहामा विश्राम लिँदै
पार्टीभित्र दबाव बढेकै बेला ओली अजरबैजान प्रस्थान
प्रचण्ड केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा
ओलीबाट धोका : प्रचण्ड
ओली एक महिना अझै सक्रिय हुने, मृगौला प्रत्यारोपण गर्न अमेरिका जाने !
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको अन्तिम तयारी